दोपट्टा | काव्यालय
दोपट्टा | कथा | काव्यालय-Kavyalaya | एम पी केयरलेस
by एम पी केयरलेस October 3, 2020
कुनै ब्रह्मास्त्र जसरी कोरोना देखा पर्यो मानव समाजमा । चारैतिर त्राहि त्राहि मच्चियो । घर फर्कन नचाहने, एकाएक पूर्णेको जून जसरी घरमा देखापरे । यसरी नै देखा परी पबित्रा तिरुवा । अनि ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्री अनि स्वयं दलित तन्नेरीको मुखमा सलबलाउन थाल्यो उही, उनीहरूको दिमागले विरासतमा बोकी ल्याएको कथन – रौतिले जस्ती राम्री ।
तासको खेलमा बोलियो – त्यो पबि कति राम्री भएकी हो, डुमेनी जस्ती छैन राँड । भट्टी पसलमा मदिरासँगै कल्पनामै भएपनि सितन जसरी चपाइए उसका छातीका ऐंसेलु दाना, पातला ओठ, खस्रो जिब्रो, बिस्तारै फुक्दै उसका कानहरू पनि चपाइए कुरुम कुरुम । उसले कल्पनामा भएपनि सहि, गज्जबको स्वाद दिई;
– बाहुन टोलका आचार्यहरूका सन्तानलाई
– बाहुसाय, राजासा’पलाई
– युधिष्ठिरका सन्तान क्षेत्रीलाई ।
यसरी कहाँ घर आउने मान्छे हो ऊ ? बजार पुगेपछि ऊ परी बनी । उसको उमेरले उब्जाएको रङ्गमाथि बजारको अलिकति रङ्ग थपी । साच्चै परीजस्ती देखिन थाली । गाउँमा ऊ पबित्रा कहिले पो थिई ? ऊ पबि थिई पबि हो, पबि नै रहिरहने छ । खै, कसरी हो ऊ स्कुलको हाजिरी रजिस्टरमा पबित्रा बनी । सरकारलाई रेमिटेन्स, पबिलाई शिक्षा र उसको भाइलाई सम्पत्ति जोहो गर्नका लागि उसका बा’आमा बम्बै पुगे । एस ई ई पास गरी । सायद, कर गरिहोली बजारतिर पढ्छु भनेर । बा’आमाले सोचे होलान् घर बसेपनि एक्लै बस्ने हो । बजार बसेपनि एक्लै बसोस् । र जजौसायकी छोरीजसरी पढोस् । सायकी छोरी जसरी नै बुझोस् दुनियाँ । जे जसरी सोचे पनि ऊ बजार पुगी । फेसबुकमा पुगी । स्वर्ग पुगी । परी बनी ।
अनि भर्चुअल परीको, भर्चुअल परिचय बन्यो;
Work at – student
Lives in – Kathmandu, Nepal
From – प्रत्येक गाउँ, Nepal
कोरोना नेपाल आइसकेपछि । नेपालमा लकडाउन आइसकेछि । ऊ घर आई आफ्नो रुप लिएर । उमेरको अलिकति चञ्चलता लिएर । दिमागमा अलिकति खुलापन लिएर । यति थोक लिएर आएकी उसलाई । गाउँ घरमा भएका वाइफाइका पासवर्ड पाउनु, हस्तिनापुर पाउनु जस्तो गाह्रो भएन । सजिलै पाई खण्डप्रस्त पाएजसरी ।
कुनै बिहान कुनै घरको अगाडिको सडकमा उभिएर । कुनै दिउँसो कुनै घरको आँगनको बोटमुनि बसेर । कुनै साँझ सडकका दुबोमा बसेर । कहिले ऊ परी बन्न फेसबुकमा पुग्थी । कहिले ऊ इच्छुक विद्यार्थी बन्न युटुबमा पुग्थी ।
एकदिन तासको खेलमा बेगमभन्दा बढी ऊ खेलाडीको आँखामा आउन थाली । बजारले उसलाई जेब्रा क्रस काट्न सिकाएको थियो, बिहान उठेर पानी थाप्न सिकाएको थियो, लाजसरम नमानी ओठमा लिपिस्टिक, आँखामा गाजल लगाउन सिकाएको थियो, निर्धक्क बोल्न सिकाएको थियो र सिकाएको रहेछ प्रेम गर्न, विश्वास गर्न, भरोसा गर्न पनि ! बजारले सिकाएका अनेक कुरामध्ये सबैभन्दा अगाडि उसले सिकेको प्रेम टुट्यो, विश्वास टुट्यो, भरोसा टुट्यो तासको खालमा । तर उसले मेसोसम्म पाइन । उसको प्रेमीले प्रेमिल आसनहरू बिनाकारण दाउमा लगाइदियो । उपल्लो जातले तल्लो जातलाई एकचोटि फेरि दाउमा लगायो ।
एकैचोटिमा कोठामा बसिरहेकी द्रौपदी युधिष्ठिरको जुवाको खालमा पुगी । उसको प्रेमीले देखाइदियो उसको कृत्रिम लुगा बेगरको प्राकृतिक शरीर, सबैले हात हातमा लियर जुम गर्दै हेरे । उनीहरूले उसको पूरा शरीर दिमागमा पूरा नबसुन्जेल हेरे । सबैको तलाउजस्तो शान्त मनमा, उसको फोटो एक ढुङ्गा भएर बर्सियो ।
सबैका आँखा एकपल्ट पबिको अनुहार हेर्न हतारिए । सबका औला तासमा जसरी उसको जिउ चिमोट्न हतारिए । पाखुरा त्यसै त्यसै बटारिन हतारिए । दिमाग सैतान हुन हतारिए तर कसैले केही भनेनन् । मात्र उसको प्रेमी भनाउँदो अलग अलग कन्डमले दिएको सन्तुष्टि र अलग अलग आसनबारे बोलिरह्यो ।
त्यसदिनपछि तासको खेलमा कहिले पबिका कपाल दाउमा लाग्न थाले । दाउमा लगाउनेले भन्यो – “मेरो घर अगाडि नेट चलाइरहेकी थिई । कस्तो दामी कपाल भनेर कपाल मुसारेको त्यो त हाँसी । साच्चै चालू हो कि क्या हो ?” यो खेल सबैले जिते सिबाय पबिले अपसोच दाउ हार्ने पबिलाई केहीपनि थाहा थिएन ।
जुवाको खालमा आँखा लगाउनेले भन्यो – “हिजो तिम्रा आँखा कति राम्रा छन् भनेको । हाँस्दै भनी – ‘मलाई चाहिँ मेरा आइब्रो मन पर्दैनन्’ भनेर । भन्दिऊँ लागेको थियो- ‘तिम्रा आइब्रो त हैनन तिम्रा जाँठा मन परे ‘ भनेर ।” जित सबैको भयो सब हाँसे ।
उसका ओठ दाउमा लगाउनेले भन्यो – “मैले त उसका ओठ औंलाले चलाइदिएँ । केही भनिनँ, सायद जिउमा काँडा उमारिसकेकी थिई होली । त्यही बेला दुईजना साइकलमा आएर कुरा बिग्रियो नत्र आज केटाहरुलाई म पनि सुनाउँथेँ ।”
निधार दाउमा लगाउनेले बडो सभ्य भएर भन्यो – “हिजो मैले तिमी निधारमा टीका लगाउने गर कसैको आँखा लाग्दैन भनेँ । क्या मज्जाले हासी राँड ।”
कहिले उसका नितम्ब दाउमा लाग्न थाले । लगाउनेले भन्यो – “हिजो मेरो घर अगाडि उभिरहेकी थिई । मैले त पिएको जोसमा उसको पछाडि च्याप्प समातिदिएँ । ऐया ! भन्दै थुचुक्क बसी । अब पाएँ भने सुताउँछु । राती बुढीसङ सुत्दा पनि पबि सम्झिएर गरियो ।” सब हाँसे, सबैको जित भयो ।
उसका स्तन उसको प्रेमीले दाउमा लगायो – “दूध सहि छन् त्यस्का, अमिलाका दाना जत्रा । हातमा ठीक्क अटाउँछन् ।”
उसका आँखा दाउमा लगाउनेले भन्यो – “उसकै अगाडि गएर पिसाब फेर्दा पनि उसले मजाले हेरिरही रे । भाइलाई मनपराई कि क्या हो ? अब मौका मिले खेलाउन लगाउँछु !”
यसरी पबि त्रसित हुँदै हरेक बेलुका भर्चुअल दुनियाँमा जान लाग्दा हरेक ठाउँमा ऊ पबि बनिरही । परी बन्न पाइन । परि बनेपनि धर्तीमा आएकी उर्वशीजस्तै । मनभरि डरै डर लिएर ।
यसरी हरेक दिन एक अङ्ग दाउमा लाग्दै जाँदा एकदिन ऊ सिङ्गै दाउमा लागी । ऊ सजिलै मान्ने केटी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो जुवाको खालले । ती दाउमा लगाउनेसँग पबिले सधैँ आफन्तको साइनो लगाउँथी, कसैलाई दाइ, कसैलाई अंकल, कसैलाई मामा र ती दाउमा लगाउनेहरू भने दाउ खोजेर बसिरहेका थिए ।
एक साँझ खाना खाएर, पबि भर्चुअल दुनियाँ कि परी बन्न चोक नजिकैको घर अगाडिको सडकमा उभिई, हातमा मोबाइल लगेर । निस्फिक्री, विश्वासका साथ, उत्सुकतासहित ।
उसले पर सडकमा दुई तन्नेरी आइरहेको देखी । नजिकै आएपछि चिनी । उसले मामा र अंकल भन्ने दुईजना । पबिले सोच्दै सोचिन । बिना स्वार्थ एक प्रश्न गरी- “कताबाट आउनु भो मामा ?” उत्तर आयो – “होटलबाट डार्लिङ !” उसले थाहा पाई उत्तर आएको हैन, वाण आएको हो । फेरि अर्को वाण आयो – “दिने हो ? पानसय दिन्छु !”
परीका पखेटा काटिए । भुइँमा पछारिएझैं लाग्यो । खुट्टा एक पाइला पछाडि सारी । मुटुको धड्कन सय पाइला अगाडि सर्यो । तर ऊ अपलक उभिरही । फेरि अर्को वाण तेर्सियो – “फलानालाई त दिन्छेस्, हामिलाई दिए के हुन्छ ?”
ऊ एक्कासी मृग दौडेझैं गरी दौडी दलित बस्तीतिर । के सम्झिँदै दौडी होली फलानो उसको प्रेमी जसलाई उसले सित्तैमा दिएकी थिई । प्रेम पाएर दिएकी थिई, कि प्रेम सम्झी ? कि सम्झी प्रेम भित्रको विश्वास र भरोसा ?
दलित बस्तीमा उसको आफ्नै मामाको घर थियो । मामा घरमा उसकी बुढी बजै मात्र बस्थिन् । मामा माइजुको उही भाग्य त हो- बम्बै, बजार, रातपाली चौकिदारी ।
ऊसँग मागिरहेका मामा र अंकल पनि उसको पछाडि पछाडि डौडिए बाघ दौडिएझैं । कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा मृग पल्टिन्छ कि ठानेर । परी उडे जसरी उनीहरूको हातबाट निस्की । पबि परी बनेर रात भर चिन्ताको सागरमाथि उडिरही । बदलाको आगो सल्काई मनमा । भोलि मान्छे बोलाएर, न्यायको माग गर्छु ठानी ।
सुरुमा त !
– जुवामा पबिका अङ्ग दाउमा राख्नेले भने, “केही भएकै रै’नछ । के को निसाफ हो ?”
– दुबै तर्फका राजनीतिक चप्रासीले भने, “गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनु पर्छ ।”
– दुबै तर्फका आइमाईले भने, “छोरामान्छेको के जान्छ ? आफ्नो नाक काटी !”
कोही यसरी चुप बसे मानौँ उनीहरू भीष्म हुन् ।
त्यो बेला पबिको न्याय हिजो राती घटना घटेको ठाउँनिर आँखामा पट्टि बाँधेर धृतराष्ट्र बनी छामछुम गर्दै थियो ।
दलित टोलकि आइमाईहरूको बिचबाट एउटा स्वर सुनियो – “बलात्कार गर्न खोज्नेलाई यसै छोड्न हुन्न ।” सबका आँखा आवाज आएतिर गयो । आवाज – निर्मलाको थियो, ऊ न्याय मागिरहेकी थिई । यो आवाजले शान्तिभंग गरिदियो । न्याय मागिरहेको ठाउँमा शान्तिको कुनै स्थान हुँदैन । ऊ भाग्नै पर्छ ।
अङ्ग दाउमा लगाउनेहरूले भने –“कसले गर्न खोज्यो बलात्कार, त्यो कस्ती हो त्यसैलाई सोध । राती राती अनलाइनमा कोसँग के कुरा गर्छ हामीलाई थाहा छ ।”
दलिततिरका तन्नेरीबाट पनि आवाज आयो – “जो चोर उसकै ठूलो स्वर ! गलत आफै गर्ने आफै हिरो पल्टिने ?”
फेरि अङ्ग दाउमा लगाउनेहरूले भने – “केही गर्या भए सोधे हुन्छ । टच पनि गर्या छैनौँ ?”
अनि उताबाट आवाज आयो – “नगर्या भए कचहरी किन बस्यो ?”
“खै त बोलाउनेले भन्नू पर्यो केही गर्या भए ।”
कुरा बढ्दै गयो । शान्ति भाग्दै गयो । पहिलो पक्षको तर्क माग्यो बलात्कार गर्न खोज्या हो भन्ने प्रमाण के छ । अनि दलित पक्षका जबर्जस्त तर्क आउन थाले । एक तन्नेरीले भन्यो – “यी भान्जिका कपाल यति लामा छन् यति राम्री छन् के राती एक्लै भेट्टाए त्यस्तो गर्ने थिएनौ ?” सब हाँसे । पबि हाँसिन । पबिले अहिले कपालको कुरा गर्ने र अस्ति कपाल सुमसुम्याउनेबिच केही भिन्नता पाइन ।
अर्कोले दलिल पेश गर्यो – “यिनको रुप नै रौतेलिका जस्तो छ त्यही भएर यिनीहरूले बलात्कार गर्न खोजेका हुन् ।” उसले अहिले यो भन्ने र अस्ति नितम्बमा चिमोठ्नेबिच केही भिन्नता पाइन ।
अर्काले त्यसैमाथि थप्यो – “काक्डाको चाना जस्तो ज्यान छ । के हामी थाहा पाउन्नौँ के गर्न खोज्या हौ ?” उसले अहिले यो भन्ने र अस्ति आफ्नै अगाडि पिसाब फेर्नेबिच केही भिन्नता पाइन ।
अर्कोले थयो – “निधार मात्रै ठूलो हो । सोझी छन् लाटी छन् केही थाहा पाउन्न सबैसँग हाँस्दिन्छिन् बोल्दिन्छिन् त्यही भएर तिमीहरूले बलात्कार गर्न खोजेका हौ ।” पबिले अहिले यस्तो भन्ने र अस्ति निधारको तारिफ गर्नेबिच केही भिन्नता पाइन ।
फेरि अर्कोले थप्यो – “यिनका ओठै पिपल पातजस्ता छन् । त्यही भएर तिमीहरूले बलात्कार गर्न खोजेका हौ ।” पबिले यसो भन्ने र अस्ति ओठमा हात पुगाउनेबिच केही फरक पाइन ।
यस्ता अनेक दलिल पेश भए । पबिका कुन कुन अङ्गले गर्दा ऊ बलात्कार हुनसक्छे । उसले प्रस्टै देखी उसका हरेक अङ्ग, त्यहाँ भएका हरेक पुरुषका आँखामा । खै, किन उसले महसुस गरी टिसर्ट, पाइन्ट लगाएर कचहरीमा आउनु गलत हो । त्यसदिनपछि पबि कुर्ता सुरुवालमा हिँड्छे । ऊसँग अचेल बाक्लो दोपट्टा पनि छ ।
एम पी केयरलेस